Daawo shaqaalaha maamulka Gobolka Banaadir oo is qarinaya kaamirada wariyaasha! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Daawo shaqaalaha maamulka Gobolka Banaadir oo is qarinaya kaamirada wariyaasha!
14th December 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Iyadoo maanta gudoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa Muqdisho, Xasan Maxamed Xuseen Muungaab uu daahfuray howlaha dariseynta degmooyinka Gobolka Benaadir, ayaa shqaalaha maamulka u muuqdaan kuwa aan dhiiri ku shaqeyn karin.
Munaasabad lagu daah furayay howlaha dariseynta degmooyinka Gobolka Benaadir, isla markaana lagu tira koobayo dadka ku nool xaafadaha magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qeyb galay xubno ka tirsan Maamulka gobolka Benaadir, saraakiil ka tirsan ciidamada booliska iyo xubno kale kaasi oo lagu qabtay xarunta Degmada Waaberi.
Dhalinyaro farabdan oo loogu talagalay iney ka shaqeeyaan diiwaangelinta dadka ku nool xaafadaha Muqdisho ayaa intii xafladdu socotay iska qarinayey kaamirada iyo sawirrada ay wariyaashu qaadayeen, iyagoo wajiyada saartay waraaqo ay wateen.
Cabdixakiin Maxamed Haaddi oo ah Madaxa dariseynta Maamulka Gobolka Benaadir ayaa tilmaamay in barnaamijkan uu wax weyn ka tari doono xagga amniga, isla markaana uu yahay mid lagu ogaanayo dadka ku nool dhamaan xaafadaha magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha Degmada Waaberi, Axmed Muumin Axmed oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in degmadiisu ay nasiib u yeelatay in maanta howlaha Dariseynta laga bilaabo.
Taliyaha qeybta booliska Gobolka Benaadir Sareeyo Guuto Maxamed Cumar Madaale ayaa sheegay in u jeedka howlaha uu yahay xasilinta amniga, isagoo xusay in maamulka gobolka ay kala shaqeynayaan hirgelinta howlaha dariseynta.
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa Muqdisho, Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab” oo furay howlaha dariseynta, isla markaana tirikoobkii ugu horeeyay ka sameeyay guri ku yaalla degmada Waaberi ayaa ugu baaqay shacabka inay kala shaqeeyaan sidii howlahan loo hirgelin lahaa, maadaama ay qeyb lixaadleh ka qaadaneyso sugidda amniga magaalo madaxda dalka.
Waxaa is weydiin leh sida shaqaale naftooda u baqaya u diiwaan gelin karaan dadka ku nool xaafadaha Muqdisho, iyadoo la ogyahay in xaafadaha qaar aan dadkooda la diiwaan gelin karin haddii aan ilaalo la siin kooxda wax diiwaangelineysa.
Dowladda Soomaaliya oo rabta dedejinta shirka lagu dhisayo maamulka gobollada dhexe
Agaasimihii wasaaradda Haweenka Soomaaliya oo xabsiga laga sii daayey